Toetr`andro Ho avy ny rivodoza Irondro
Feno omaly maraina ny fepetra maha-rivodoza ireo tangoron-drahona any amin’ny faritra avaratry ny nosy iny.
Any amin’ny manodidina ny 2.186 Km somary Avaratra Atsinanan’ Antalaha no misy ny foibeny. 65 Km/ora ny rivotra miaraka aminy ary arahina tafiotra 90 Km/ora. Mikisaka mianatsimo somary atsimo atsinanana izy ka mahafaka 09 Km/ora. Hisy, araka izany, ny toro-marika hapetraky ny tompon’andraikitra manam-pahefana amin’ ny faritra SAVA, DIANA ary Sofia ho mariky ny fanairana amin’ny fihavian’ny rivodoza. Hisy rahateo, manaraka izany, ny fepetra isan-tsokajiny izay tokony ho raisin’ny mponina amin’iny faritra tendron’ny nosy iny, indrindra ny tsy fanjonoana an-dranomasina intsony. Ilaina, hatrany ny fahamailona ho an’ny faritra rehetra handalovan’izany rivodoza izany.